Grace Corp : hasandratra ny vokatra malagasy avo lenta | NewsMada
Hitondra rivo-baovao eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy ny Grace Corp, ivondronan’ny Grace Music, mpamokatra rakipeo; ny DL Visual, mpamokatra rakitsary, ny sampana momba ny informatika ary ny mpikarakara hetsika samihafa ara-javakanto.
Vokatra tsara avy amin’ny teknolojia avo lenta, nokirakirain’ny teknisianina matihanina (malagasy sy vahiny), vokatra maharaka ny fenitra iraisam-pirenena afaka mifaninana amin’ny vitan’ny vahiny. Ireo no tanjon’ity trano mpamokatra ity, raha ny nambaran’ny talen’ny serasera, Razakarimanana Andrianjakamahery, omaly, nandritra ny fampahafantarana ny fisokafany, teny Analamahitsy. Misokatra amin’ny sokajina mozika sy mpanakanto rehetra ny Grace Corp. Efa miara-miasa amin’ity trano famokarana ity ry Jazz MMC, Tence Mena ary i Alison.
Tanjon’ny mpitantana ny Grace Corp koa ny hisintona mpanakanto vahiny hamokatra eto amintsika. Efa tratra izany ankehitriny, satria anisan’ireo efa namoahany rakitsary, ohatra, i Neïman. Nomarihin’i DJ B1, miandraikitra ny feo, fa mora ny saran’ny fanaovana rakikira sy rakitsary eto amintsika, na mitovy amin’ny any ivelany aza ny fitaovana ampiasaina, satria tsy misy fikarakarana taratasy maro.
Marihina fa DJ iraisam-pirenena i B1, nanao ny “mixage” ny hiran’ny mpanakanto fanta-daza maneran-tany, toa an-dry Rihanna sy Madonna. Teratany malagasy, nianatra tany New-York koa ny injenieran’ny feo ao amin’ny trano famokarana.